Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more | Nepalko entertainment web site
गुलियो नछुने देउवा, चिल्लो पीरो परे हर्काछन् , फुर्सदमा जोक्स सुनाउँछन्
शेर बहादुर देउवा हालै भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट निकटतम प्रतिद्धन्दी रामचन्द्र पौडेललाई हराउँदै पार्टी सभापति निर्वाचित भएका छन् । उनको राजनीतिक जीवनका बारेमा संचारमाध्यममा खवरहरु आईरहन्छन् । राजनीतिक ब्यक्तिको, ब्यक्तिगत जीवन भने प्राय गोप्य नै हुने गर्दछ । भनौँ, राजनीतिका अगाडि उनको व्यक्तिगत बानीब्यहोरा, पारिवारिक कुरा संचारमाध्यममा ओझेलमा परेका हुन्छन् । बुढानिलकण्ठमा परिवारका साथ बस्ने देउवाको आज हामीले केही रोचक बानीब्यहोरा समेटी यो सामग्री तयार पारेका छौँ ।
गुलियो नछुने देउवा, चिल्लो पीरो परे हर्काछन्
शेरबहादुर देउवा साढे ७ बजेसम्ममा उठिसक्छन् । ब्यायाम गर्न नरुचाउने देउवा, ग्रिन टि लिन्छन् । पत्रपत्रिका पढ्ने, समाचार सुन्ने, हेर्ने उनको बानी छ । तर, संचारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिन भने उनी झर्को मान्छन् । यस कुरामा उनकी श्रीमती आरजुले सम्झाउँछिन् । देउवालाई न व्यायाममा मन जान्छ न योगामा तै पनि स्वस्थ नै देखिन्छन् । तर, खानेकुरामा भने उनी सचेत छन् । गुलियो त उनलाई नदेखाए, नसुनाए पनि हुन्छ । खाना झुक्किएर चिल्लो पीरो परे त उनी हकार्छन् नै । साधारण खाना रुचाउने देउवाको श्रीमती भने खानाकी सौखिन हुन् । उनी श्रीमतीलाई लिएर बाहिर खान जान्छन् । उनलाई रोष्टेड र ग्रिल्ड मासु निकै मन पर्छ । भान्छामा काम गर्न भने उनलाई फिटिक्कै रुची छैन । बुढानिलकण्ठ बस्न थालेको १५ बर्ष भयो, यो अबधिमा उनी मुश्किलले दुई चोटी भान्छा छिरे होलान् ।
नातीनतिना खेलाउने रहर
देउवाले बिबिसी नेपाली सेवाको एक अन्र्तवार्तामा अन्र्तवार्ताकारलाई आफू बृद्ध नभएको बताएका थिए । उनले यस बिषयमा प्रतिपश्न नै गरेका थिए– कसले भन्यो म बूढो भयो भनेर ? म बूढो भएको छैन । स्मरण रहोस् उनी कुनैबेला बिबिसीमै काम गर्थे तर, उनलाई नातीनतिना खेलाउने स्वभाविक रहर भने जागिसेको छ । यसले पनि उनी बुढ्यौली लागेको संकेत गर्छ । उनी अब आफ्नो छोराको बिवाह गरी घरमा बुहारी भित्र्याउन चाहन्छन् । उनी छोराको विवह यस कारण गर्न चाहन्छन् कि, अब उनलाई नातानतिना खेलाउने रहर लागिसक्यो । उनी छोरासँग निकै नजिक छन् । मिडियासँग बोल्न नरुचाउने देउवा छोरासँग भने खुलेर बात मार्छन् । उनी छोरासँग व्यक्तिगतदेखि राजनीतिका गफ पनि गर्छन् । उनका छोरा पोलिटिकल साईन्सकै बिद्यार्थी भएकाले पनि उनी राजनीतिमा चासो राख्छन् ।
देउवाले, एकैचोटी ३६ हजार पैसा माग्दा रिसाईन आरजु
देउवालाई सँधै चिटिक्क परेर हिड्नुपर्छ । उनलाई दौरा सुरुवाल र सुट पाईन्ट निकै मन पर्छ । आफूलाई चाहिएको कपडा उनी आफैँ किन्छन् । र, कार्यक्रम अनुशार पहिरन फेरेर जान्छन् । आफ्ना लागि खर्चको जोहो पनि आफैँ गर्छन् । कहिलकाहीँ उनी श्रीमतीसँग पैसा माग्न पनि पछि हट्दैनन् । एक पटक श्रीमती आरजुले ३६ हजार पैसा उनलाई दिएका छन् । खासमा,देउवाले त्यो रकम एकजना व्यक्तिको श्रीमतीको अप्रेशनका लागि दिएका थिए । यस कुराले आरजुलाई रिस पनि उठेको थियो । उनले त्यो पैसाले, अरुथोकै गर्ने भनेर योजना बनाउँदै आएकी थिईन् ।
बिहान उठेदेखि सुरु हुन्छ देउवाको गाली
देउवा रिसालु स्वभावका छन् । कहिलेकाहीँ त बिहान उठेदेखि उनको गाली सुरु हुन्छ । उनलाई रिसाउन कुनै कारण चाहिदैन । यहाँसम्म कि उनी रिसाएनन् भने आरजुलाई चिन्ता पर्छ–आज उहाँ किन रिसाउनुभएन ? तर, उनी बाहिरका कुरा घरमा ल्याएर भने रिसाउँदैनन् । उनीहरुबीच सहमती नै भएको छ, बाहिरका कुरा घरभित्र नल्याउने । उनी झनक्क रिसाउने बानी भए पनि, त्यो रिस लामोसमयसम्म टिक्दैन । उनी जिद्धी पनि छन् । उनी कम बोल्छन् तर, आफ्नो जिद्धी छाड्दैनन् ।
जोक्स सुनाउँछन् श्रीमतीलाई
उनी रिसालु मात्रै छैनन्, रमाईला पनि छन् । उनलाई जोक्स एकदम मन पर्छ । उनी जोक्सहरु सुन्छन् । उनलाई जोक्स सुन्दा , सुनाउँदा रमाईलो लाग्छ । उनी घरमा जोक्स सुनाउँछन् पनि ।
दिनमै ६० वट्टासम्म चुरोट सकिन्थ्यो
उनी पहिले चुरोटका अम्मली थिए । अहिले छाडिसकेका छन् । दिनमै ६० वट्टासम्म चुरोट सकाउने देउवाले आफ्नै ईच्छाले चुरोट छाडेका हुन् । पेट बढ्ने चिन्ताले बियर खाँदैनन् । कहिलेकाहीँ एक –दुई ग्लास वाइन खान्छन् ।
(यो सामग्री, २६ गते फागुनका दिन, नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित “यस्ता छन् देउवा “शीर्षकको लेखको आधारमा तयार पारिएको हो ।)
सम्बन्धित कमेडी समाचारहरु
टेन्सनमा हुनुहुन्छ हेर्नुस फ्रेस बनाउने भिडियो (भिडियो सहित)
तपाईलाई मोबाईल र टिभिको सम्बन्धका बारेमा थाहा नहुन सक्छ । आज हामि तपाईलाई टिभि र मोवाईलको सम्बन्धका बारेमा बुझाउदैछौ । जान्न चाहानुहुन्..
जहाँ जहाँ जाम, त्यहाँ सिताराम : छातीमै छ श्रीमतीको नाम
मुस्कानसहिको सेवामा मधुसुदन
फूलसँग रमाउने नारायणभक्तको फूलजस्तै जिन्दगी
बिद्यार्थीको खुसीमा लुकेको केशव पुरीको खुसी
बेहुली लिन जाँदा पाँच घण्टा ढिलो भयो – एपेक्स ब्याङ्कका सिईओ